Apple waxay meesha ka saaraysaa ansixinta maalmaha maalmaha iibka ardayda | waxaan ka imid mac
Apple waxay meesha ka saaraysaa ansixinta maalmaha maalmaha ee iibsashada ardayda
Mid ka mid ah ololayaasha ay Apple leedahay sanad walba waa in ay awood u yeelato inay ku iibsato alaabada ardayda, macalimiinta ama kuwa la midka ah qiimo gaar ah. Alaabooyinka qaarkood qiimo dhimisyadan ayaa aad uga muhiimsan waxayna kugu martiqaadayaan inaad awood u yeelatid inaad ku iibsato, tusaale ahaan, Mac qiimooyin soo jiidasho leh. Si kastaba ha ahaatee, habka xaqiijinta xogta, taas oo ah, si loo caddeeyo inaad runtii arday ahayd, waxay ahayd xoogaa dhib badan. Maalmaha maalmaha ayaa mas'uul ka ahaa oo mararka qaarkood ma aqoonsan dukumentiyada la bixiyay, ugu yaraan Spain. Taasi waxay u muuqataa inay isbedelayso sababtoo ah Apple waxay sameyn doontaa maalmaha Ciidaha la'aan.
Unidays waa adeeg qiimo dhimis khadka ah oo si macquul ah u shaqeeya, si fiican waxaan ula jeedaa si fiican ayey u shaqeysay. waayo waa run taas dhowr maalmood waxay ku dhowdahay inaan suurtagal ahayn in la sameeyo qalliin kasta iyada oo loo marayo boggeeda. Waa yara niyad jab. Waxaad doonaysaa inaad isu diwaangeliso sidii shaqaale aqoon leh oo waxay ku siinaysaa khalad, ama si sax ah uma ururinayso xogta. Hagaag maxaa la odhan karaa masiibo ahaan.
Tani waxay noqon kartaa sababta Apple ay u muuqato inay ka laabatay go'aankeedii ahaa inay u baahan tahay caddayn adag macaamiisha dukaanka waxbarashada onlaynka ah dhawr maalmood ka dib markii ay hirgelisay. Arbacadii, ardayda, macalimiinta iyo dadka kale ee ku jira goobaha waxbarashada ayaa looga baahan yahay inay xaqiijiyaan xaaladooda ka hor intaysan helin qiimo dhimis 10% ah alaabta Apple. Laakiin hadda, maanta oo Sabti ah, shuruuddaasi lagama maarmaan ma aha.
Waa run in b sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay guuldarrooyinka Unidays ama waxay noqon kartaa sababtoo ah Apple ma rabto xaddidaad badan iyo inay awood u yeelato inay dad badan ku gaarto qiimo dhimistaas. Iibka badan = lacag badan. Waxaan ka shakisanahay inay ku meel gaar tahay, maadaama ay diyaar u tahay macaamiishu inay xaqiijiyaan xaaladdooda waxbarasho ilaa maalmaha Ciidaha si ay ugu qalmaan qorshaha ardayga Music Apple ee la dhimay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay meesha ka saaraysaa ansixinta maalmaha maalmaha ee iibsashada ardayda
Sida loo wareejiyo sawiro ka iPhone in Mac